Sistemụ Nọọsụ Ekwenti Nri Dị ala [EA008-CMU] | Ngwọta OMG
Ịkwụ ụgwọ Nọọsụ Nọọmenti na-efu ala dị ala [EA008-CMU]
Ngwọta Ngwọta Na-efu
Usoro nlekọta nọsị na-enye gị nlekota CordLess® na ikuku. Ezigbo ụlọ ọgwụ, ebe obibi ndị nọọsụ & obibi obibi. Enwere ike iji ya dịka onye nlekọta na-elekọta ndị na-elekọta ihe na gburugburu ebe obibi ọgwụ.
Economy CordLess® mkpuchi dị mfe iji. Enwere ike itinye ebe nlekota nlekọta nlekota n'ọdụ ụgbọ nọọlụ iji hụ ndị na-elekọta gị mgbe ndị bi na mkpa enyemaka. Ndị na-elekọta nwere ike nyochaa ọtụtụ ngwaọrụ na etiti ebe n'otu oge. Nke a CordLess® Fall Prevention Alarm na-arụ ọrụ na bọtịnụ na-elekọta nurse, sensọ ụrọ, na Mkpụrụ CordLess® arọ nkwụsị na nkwụ.
Wepu ntughari si n'ulo
A na-agwa ndị na-elekọta gị ngwa ngwa na ìhè na-egbuke egbuke nke nwere ike ịhụ site na anya. Ndị na-adịghị mma nke ndị gentler agaghị eme ka ndị bi n'ime obodo maa jijiji ma ọ bụ na-echegbu ndị ọzọ ma na-enye nkwụsị ịda mbà. Ebe nyochaa ebe obibi nke na-anọghị ebe obibi maka ngwọta dị jụụ karị.
Nchekwa ikuku na-arụ ọrụ dị irè ma dị irè.
Mfe melite ma rụọ ọrụ.
Olu a na - edozi - mkpuchi mgbochi ọdịda nwere oke dị ala, ọkara ma dị elu ma ọ bụ ọnọdụ dị mma.
A na-etinye Central Monitor na nọọsụ nọọsụ iji hụ ndị na-elekọta gị mgbe ndị bi na mkpa enyemaka.
Mkpu na ebe ndị nọọsụ ma ọ bụ ebe ndị ọzọ na-ahụ anya ma gosipụta onye bi na mkpu ahụ
A na-ezigara onye na-elekọta ya n'otu oge na-elekọta pager.
Igodo oku na-enye gị ohere ịbịa na-akpọ onye na-elekọta gị n'oge ọ bụla, ntinye aka bọtịnụ na-ezigara na Central Monitor na onye na-elekọta onye na-elekọta ya n'otu oge, nwere ike ịdakwasị ya ma ọ bụ jụọ ya na lanyard.
Ọrụ na bọtịnụ oku, ụyọkọ señsor na mpempe CordLess® na ala ntọala - Ruo ihe anọ (40) / mkpọchi oku nwere ike iji ya na otu mkpu.
Nzuzo 14311 7 Echiche Taa
Igwe oku akpọrọ akara (1)
コ ス 1 XNUMX XNUMX (XNUMX)
EA041 - OMG 2 na 1 wireless onye na-elekọta ụlọ na-akpọ sistemụ mkpu,…
EA046 - Sistemụ Igwe Ekwentị ikuku